कौवालाई खान दिए हुन्छ, पाप लाग्दैन | सिमान्तMarginal कौवालाई खान दिए हुन्छ, पाप लाग्दैन – सिमान्तMarginal
Posted on 21 Nov 2015 21 Nov 2015 by Jesi | INCOMESCO
हालै बाबुराम, पद्मरत्न र आफुलाई मानवाधिकारवादी भन्नेहरुले नेपाली जनतालाई नाकावन्दी लगाउन उक्साउने भारतीय राजदूतसॅग तीन घण्टा लामो ‘भलाकुसारी’ गरेको भन्ने सुन्नमा आयो। उनिहरुले नाकावन्दी अरू लम्व्याउन र प्रधानमंत्री वलीको सरकार गिराउन सल्लाह दिएको पनि सुनियो। पद्मरत्नले त ‘पूर्ण नाकाबन्दी लगाउनुपर्छ। एउटा समान नेपाल छिर्न दिनु हुँदैन।’ भन्न सम्म भ्याएछन । पूर्व प्रधानमंत्री र पूर्व मंत्रीहरुले ‘कुटनैतिक प्रकृया’ पुरा गरेर त्यसरी भेटेका हुन ? यदि होईनन भने सरकारले यस्ता देश द्रोहीहरुलाई जवाफ लिएर सिधै जेल चलान गरेर कोचिदिए हुन्छ । सरकार त्यसो गर्न सक्दैन भने जनताले सरकारलाई यौटा लिखित जानकारी दिएर ‘जनता मारेर आएका’ यस्ता अपराधी देश द्रोहीहरुलाई सिधै काटेर भोका कौवालाई खान दिए हुन्छ । अन्याय हुॅदैन, पाप लाग्दैन ।
छ जना उपप्रधान मंत्रीहरु राखेर बनाईएको अहिलेको सरकार देश र जनताको काम गर्न हो कि खडग प्रसाद वलीको कुर्चिको ‘खडगो’ टार्न हो ? राहतका नाममा कमसेकम मूढा त चिराएर बाॅढनु पर्छ । नचिराईकन मूडा बाॅढनका लागि जनताले गाॅस कटाएर यस्तो नालायक सरकार पाल्न जरुरी छैन । मूढा घर पुर्र्याउने यातायात, बन्चरो, काटने मान्छे कसरी जोह गर्ने ? पैसो त लिएकै थियो, बरु अलिकति बढी लिएर प्रवन्ध मिलाउनु पर्दैन ? चाइनाले धेरै चिज दिन्छु भन्दा त्यसको क्षणिक रुपमै भए पनि प्रवन्ध गर्न नसक्ने अनी एक बर्ष भित्र लोड सेडिङ हटाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रिलाई के भन्ने ? यस्ता नालायकहरुलाई २४ घण्टा भित्र अपदस्थ गरिदिए हुन्छ। पाप लाग्दैन; फरक पर्दैन ।
Previous Postदेश पोल्ने मलामी (कबिता)Next Postनक्कली नागरिकता छानविन गर्न आयोगको माग